Ukuphupha ngeBhaloni Discover ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ibhaluni inokugcwaliswa ngumoya okanye igesi kwaye yindawo eyaziwayo yokuhombisa imibhiyozo kunye nemibhiyozo efana negesi okanye ibhaluni yomoya. Abantwana, ngakumbi, banomdla kakhulu kwibhaluni kwaye bonwabile ukuyifumana njengesipho.
Njengebhaluni yomoya oshushu, ibhaluni ikwasebenza njengendlela yokuhamba apho abantu bakwaziyo ukwenza iphupha lokubhabha libe nokwenzeka nangaphambi kokuba iinqwelomoya zibekho. Njengephupha, ibhaluni ihlala ivela ngelixa ulele, ihlala idityaniswa nomhlekisi, isekisi, okanye into elungileyo. Ibhaluni ayinakuphoswa ngumhla wokuzalwa komntwana okanye ethekweni.
Ngaphambi kokuba ujike kutoliko jikelele, ngokwengqondo nangokwasemoyeni lwamaphupha esimboli "ibhaluni", awona maphupha abalulekileyo apho ibhaluni ibonwa ephupheni landela kuqala:
1 Uphawu lwephupha «ibhaluni»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Kwenzeka ntoni kwibhaluni ephupheni?
1.1.1 Inflate ibhaluni ephupheni.
1.1.2 Iphupha lokubhabha ngebhaluni
1.1.3 Vumela ibhaluni iphakame xa ulele
1.1.4 Ubusuku obubi bengozi yebhaluni
1.2 Ibhaluni ebomvu ibonakala ephupheni.
2 Uphawu lwephupha «ibhaluni» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ibhaluni» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «iglobhu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibhaluni»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Kwenzeka ntoni kwibhaluni ephupheni?
Inflate ibhaluni ephupheni.
Nabani na ovuthela ibhaluni ngelixa elele ubeka amandla amaninzi, ithemba, kunye nobuchule kumcimbi othile ebomini bokuvuka. Ukuba ubona omnye umntu evuthela ibhaluni ephupheni, unikezela amandla akho koku (okanye komnye umntu obalulekileyo). Ngaba ukhona umntu ofuna uncedo lwakho? Awuyi kumphoxa lo mntu. Lumka ungaz "uphelelwa ngumoya" ngokwakho.
Iphupha lokubhabha ngebhaluni
Ngaba uye wabhabha kwibhaluni? Oku kunokuthetha ibhaluni eqhelekileyo eqhelekileyo, kumtya owudadayo; ephupheni, yonke into inokwenzeka. Nokuba ibhaluni okanye ibhaluni yomoya eshushu: ukubhabha ngayo kufanekisela ukoma komphuphi wenkululeko kunye nobuchule bokuyila. Ukuba ukubhabha ephupheni kunika imvakalelo ekhululayo, umntu ochaphazelekayo ulungelelene ngengqondo. Ukuba ufumana uloyiko kunye nokothuka ngelixa ubhabha ibhaluni, iimfuno zakho ziyakukhathaza.
Vumela ibhaluni iphakame xa ulele
Ukuba uphupha uvumela ibhaluni enemibala inyukele esibhakabhakeni, ke unethemba lokuphinda ungene kuyo el mundo yomlindo. Uzabalazela ukufumana amathuba amatsha kwaye usebenzise amathuba. Ngaba unomdla kumsebenzi omtsha? Ngaba ungathanda ukuba nabantwana kusapho lwakho? Umsebenzi omtsha? Yonke into enomdla nengaziwayo kufuneka iphononongwe. Uhamba ngempumelelo. Kubalulekile ukuba ungalahleki kwinyani kwaye iinjongo azimiselwanga phezulu kakhulu.
Ubusuku obubi bengozi yebhaluni
Ngaba uvukile umanzi umbilo, emva koko waphupha ubaleka ungene ezinzulwini ngebhaluni yomoya oshushu? Ibhaluni ebikubambe emoyeni ngephanyazo ibingasenakubuxhasa ubunzima bakho? Iimeko ezinjalo zamaphupha zihlala zibhengeza umsindo kunye nentlungu kwihlabathi elivusayo, esele iqondwe yingqondo. Nokuba injongo ebekiweyo ayinakufezekiswa. Ke kubalulekile ukwenza izicwangciso ezintsha kwaye ungadimazeki!
Ibhaluni ebomvu ibonakala ephupheni.
Olubomvu ngumbala womqondiso. Iyabonakala, itsalela ingqalelo, isikhumbuza i-rose, igazi okanye irobhothi ebomvu. Ukuba ibhaluni yephupha ibomvu, ifanekisela ubuqu bephupha. Bayakuxabisa ukuma ngaphandle kwesihlwele kwaye bahluke. Nokuba kungenxa yempahla ekhethekileyo, iinwele ezahlukileyo, okanye indlela yokuziphatha engahambelaniyo nomgangatho.
Ngengqondo yokomfuziselo, ibhaluni ebomvu ephupheni ikwabonisa inqanaba eliphezulu kakhulu lokuzithemba komntu ophuphayo, ahamba naye ebomini.
Uphawu lwephupha «ibhaluni» - ukutolikwa ngokubanzi
Iphupha lophando liguqulela ibhaluni yamaphupha ngokwahlukileyo. Ukuba iphupha libona ibhaluni, kunokuba ngumqondiso wokuba ukwinto enkulu. ukuphoxeka Uya kuzama. Kodwa kunokwenzeka ukuba umphuphi unezimvo ezilungileyo okanye nokuba yinto ebalulekileyo xa ibhaluni ibonakala kwilizwe lamaphupha.
Ukuba amava ephupha lakhe ephupheni ukuba yena ngokwakhe ubhabha ebhaluni, lo mfanekiso wephupha unokuba ngu isilumkiso ukuba. Ukuphupha ukuphambuka kude kakhulu kwiinjongo ezinokufikelelwa kwilizwe elivusayo kwaye ungaphulukana nomhlaba ngokulula phantsi kweenyawo zakho.
Olunye utoliko lwalo mqondiso luthi, nangona kunjalo, ukuphupha into enye Umgama kufanele kwaye ngenxa yoko isonjululwe ingxaki ngokufanelekileyo kunye nentloko epholileyo.
Ukuba uphupha ubona ibhaluni egcwele igesi iqhuma, ebomini bokuvuka uyakucaphukisa umntu oya kuthi abe nomsindo naye.
Uphawu lwephupha «ibhaluni» - ukutolikwa kwengqondo
Ibhaluni isetyenziswa ikakhulu kutoliko lwengqondo lwamaphupha njenge Iinqaba ezisemoyeni itolikwe. Ixhala lokungazi malunga nokubaleka kule meko ikhoyo ngoku ebomini bokuvuka xa umhlaba ubonakala njengomfanekiso wephupha. Ubuthongo baziva buthintelwe kwaye boyisiwe kule meko. Kodwa inokulumkisa ngokulahleka kwenyani kwaye icebise abaphuphi ukuba bahlale behlala emhlabeni.
Ukuba ibhaluni yomoya ebotshiweyo okanye eshushu, le nto ifuzisela Ukunxanelwa ukonwaba yokuphupha. Ngokuvuka emhlabeni, ufumana umbono ohlukileyo kunye nokujonga imeko yangoku kubomi bakho bokuvuka.
Kule meko, uhambo oluzolileyo nolonwabisayo lukwabonisa ikamva eliqinisekileyo lamaphupha. Uqhushululu kulindeleke kwihlabathi labalindi ngexesha lohambo olungazinzanga kwibhaluni ebanjiweyo. Kuba ukukhwela kwebhaluni yomoya oshushu kuhlala kuxhomekeke emoyeni, lo mfanekiso uphuphayo ikwangumqondiso wokukhangela oko Suerte kwaye ngethemba lokuba umoya uvuthuza kakuhle.
Icinezelwe ingxaki Ihlala ibonakala kwilizwe lamaphupha njengebhaluni eqhumayo. Kodwa inokuba yinto ethemba eqhuma ngokomfuziselo.
Uphawu lwephupha «iglobhu» - ukutolika kokomoya
Kwinkcazo yamaphupha okomoya, iglobe ifanekisela Libertad kunye Indawo.